Monday, 18 February 2019, 09:24
မြန်မာနိုင်ငံမှာ တရားလွှတ်တော်ရှေ့နေများ ကောင်စီ- Bar Council ဥပဒေသစ် မူကြမ်းထဲမှာ နိုင်ငံတော် ရှေ့နေချုပ်ရုံးက လွှမ်းမိုး ချုပ်ကိုင်ထားတဲ့အချက်ကို ပြင်ဆင်ပြီး၊ နိုင်ငံတကာ တရားလွှတ်တော် ရှေ့နေများကောင်စီတွေရဲ့ အဆင့်အတန်းနဲ့ အညီ ဥပဒေ ပြဋ္ဌာန်းနိုင်ဖို့ ရန်ကုန်မြို့ အခြေစိုက် ရှေ့နေများ ကွန်ရက်အဖွဲ့က ဖေဖော်ဝါရီလ ၂၆ ရက် နေ့စွဲနဲ့ ကြေညာချက်ထုတ်ပြန်ပြီး တိုက်တွန်းလိုက်ပါတယ်။ ဒီကြေညာချက်နဲ့ ပတ်သက်လို့ ရှေ့နေများကွန်ရက်အဖွဲ့က တရားလွှတ်တော်ရှေ့နေ ဦးကိုနီကို RFA သတင်းထောက် ကိုမျိုးဇော်ကိုက တွေ့ဆုံမေးမြန်းထားပါတယ်။
ဘိန်းဘုရင်ဟောင်း လော်စစ်ဟန်၏ ဈာပန ရန်ကုန်တွင် ကျင်းပ ၁၉၇ဝပြည့်လွန်နှစ်တွေမှာ မူးယစ်ရာဇာအဖြစ် ကျော်ကြားခဲ့တဲ့ ဘိန်းဘုရင်ဟောင်း လော်စစ်ဟန်ရဲ့ ဈာပနကို ရန်ကုန်မြို့ မြောက်ဥက္ကလာပက ယူနန်သုဿန်မှာ ဇူလိုင် ၁၇ရက်နေ့က သဂြိုဟ်ခဲ့ပါတယ်။
ရှေ့နေဦးကိုနီလုပ်ကြံမှု စွဲချက်တင်ပြီ ~~~~~~~~~~~~ ■ NLD အမျိုးသားဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ချုပ်ရဲ့ ဥပဒေအကြံပေး ရှေ့နေဦးကိုနီ လုပ်ကြံခံရပြီး တနှစ်ကျော်အကြာမှာ အမှုနဲ့ပတ်သက်လို့ ဖမ်းဆီးထားသူ ၄ ယောက်ကို ရန်ကုန် မြောက်ပိုင်းခရိုင်တရားရုံးက ရာဇသတ်ကြီးဥပဒေပုဒ်မ ၃ဝ၂-၁၊ ၂၁၂ တို့နဲ့ ဖေဖော်ဝါရီလ ၉ ရက်နေ့မှာ စွဲချက်တင်လိုက်ပြီဖြစ်ပါတယ်။ RFA သတင်းထောက် ကိုကျော်ဇောဝင်း တင်ပြထားပါတယ်။ (ရိုက်ကူး- ထက်အာကာ/RFA) ~~~~~~~~~~~ လွတ်လပ်တဲ့အာရှအသံ မြန်မာသတင်းနဲ့ဗီဒီယိုတွေ ကြည့်နိုင်ဖို့ RFA မြန်မာဌာနဝက်ဘ်ဆိုက်: http://www.rfa.org/burmese/ RFA မြန်မာဌာနသတင်းလွှာရယူဖို့: http://www.rfa.org/burmese/subscribenewsletter RFA မြန်မာဌာန Podcast: http://streamer1.rfaweb.org/archive/BUR/Burmese_podcast.php Subscribe on: YouTube: http://bit.ly/2ajgBxf Facebook: https://www.facebook.com/rfaburmese/?fref=ts Twitter: https://twitter.com/RFABurmese YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCE75dgnEYPacknHHg3a3sJg Soundcloud: https://soundcloud.com/burmeserfa တယ်လီဖုန်းအတွက် RFA Burmese Mobile App Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=gov.bbg.rfa&hl=en Apple: https://itunes.apple.com/us/app/radio-free-asia-rfa/id744921169?mt=8
Head Chef Stu Etkind of his own restaurant "Stu's Goons" located in Davis Square in Somerville Mass explains the basic principles and methods behind creating his favorite snack, the rangoon.
This page contains text from Wikipedia, the Free Encyclopedia - https://wn.com/Vishal_Chandrasekhar
ှုInterview with Lawyer U Ko Ni on Bar Council Act
Ex-Drug Kingpin Lo Hsing Han's Funeral Takes in Rangoon
Indictment on Murder of NLD Lawyer U Ko Ni
ရှေ့နေဦးကိုနီလုပ်ကြံမှု စွဲချက်တင်ပြီ ~~~~~~~~~~~~ ■ NLD အမျိုးသားဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ချုပ်ရဲ့ ဥပဒေအကြံပေး ရှေ့နေဦးကိုနီ လုပ်ကြံခံရပြီး တနှစ်ကျော်အကြာမှာ အမှုနဲ့ပတ်သက်လို့ ဖမ်းဆီးထားသူ ၄ ယောက်ကို ရန်ကုန် မြောက်ပိုင်းခရိုင်တရားရုံးက ရာဇသတ်ကြီးဥပဒေပုဒ်မ ၃ဝ၂-၁၊ ၂၁၂ တို့နဲ့ ဖေဖော်ဝါရီလ ၉ ရက်နေ့မှာ စွဲချက်တင်လိုက်ပြီဖြစ်ပါတယ်။ RFA သတင်းထောက် ကိုကျော်ဇောဝင်း တင်ပြထားပါတယ်။ (ရိုက်ကူး- ထက်အာကာ/RFA) ~~~~~~~~~~~ လွတ်လပ်တဲ့အာရှအသံ မြန်မာသတင်းနဲ့ဗီဒီယိုတွေ ကြည့်နိုင်ဖို့ RFA မြန်မာဌာနဝက်ဘ်ဆိုက်: http://www.rfa.org/burmese/ RFA မြန်မာဌာနသတင်းလွှာရယူဖို့: http://www.rfa.org/burmese/subscribenewsletter RFA မြန်မာဌာန Podcast: http://streamer1.rfaweb.org/archive/BUR/Burmese_podcast.php Subscribe on: YouTube: http://bit.ly/2ajgBxf Facebook: https://www.facebook.com/rfaburmese/?fref=ts Twitter: https://twitt...
မြန်မာနိုင်ငံမှာ တရားလွှတ်တော်ရှေ့နေများ ကောင်စီ- Bar Council ဥပဒေသစ် မူကြမ်းထဲမှာ နိုင်ငံတော် ရှေ့နေချုပ်ရုံးက လွှမ်းမိုး ချုပ်ကိုင်ထားတဲ့အချက်ကို ပြင်ဆင်ပြီး၊...
ဘိန်းဘုရင်ဟောင်း လော်စစ်ဟန်၏ ဈာပန ရန်ကုန်တွင် ကျင်းပ ၁၉၇ဝပြည့်လွန်နှစ်တွေမှာ မူးယစ်ရာဇာအဖြစ် ကျော်ကြားခဲ့တဲ့ ဘိန်းဘုရင်ဟောင်း လော်စစ်ဟန်ရဲ့ ဈာပနကို ရန်ကုန်မြ...
ရှေ့နေဦးကိုနီလုပ်ကြံမှု စွဲချက်တင်ပြီ ~~~~~~~~~~~~ ■ NLD အမျိုးသားဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ချုပ်ရဲ့ ဥပဒေအကြံပေး ရှေ့နေဦးကိုနီ လုပ်ကြံခံရပြီး တနှစ်ကျော်အကြာမှာ အမှုနဲ့ပတ်...
Head Chef Stu Etkind of his own restaurant "Stu's Goons" located in Davis Square in Somerville Mass explains the basic principles and methods behind creating hi...
မြန်မာနိုင်ငံမှာ တရားလွှတ်တော်ရှေ့နေများ ကောင်စီ- Bar Council ဥပဒေသစ် မူကြမ်းထဲမှာ နိုင်ငံေ...
ဘိန်းဘုရင်ဟောင်း လော်စစ်ဟန်၏ ဈာပန ရန်ကုန်တွင် ကျင်းပ ၁၉၇ဝပြည့်လွန်နှစ်တွေမှာ မူးယစ်ရာဇာအ...
ရှေ့နေဦးကိုနီလုပ်ကြံမှု စွဲချက်တင်ပြီ ~~~~~~~~~~~~ ■ NLD အမျိုးသားဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ချုပ်ရဲ့...
Head Chef Stu Etkind of his own restaurant "Stu's Goons" located in Davis Square in Somerv...
ှုInterview with Lawyer U Ko Ni on Bar Council Act...
Ex-Drug Kingpin Lo Hsing Han's Funeral Takes in Ra...
Indictment on Murder of NLD Lawyer U Ko Ni...